IiFlethi zaseNavy Yard (Flat A) - Imbali yaseAmherstburg
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJason
Itsha kraca, ilungele ukufumana iindwendwe ngoMeyi ka-2018.
Senze indawo yangoku yokwamkela iindwendwe. Amagumbi ama-2 e-BR ecaleni koMlambo iDetroit kunye neNavy Yard Park ngaphesheya kwesitrato. Yicinge njengekhaya lakho kude nekhaya!
Uya kufumana indawo ezolileyo ehonjiswe ngeefoto ezibhiyozela imbali etyebileyo yase-Amherstburg!
Ifumaneka edolophini Amherstburg, kunye yokutyela ngezantsi. Kuhambo olufutshane ukuya kwiindawo ezininzi ezinomtsalane edolophini kunye ne-20 min drive ukuya eWindsor okanye eDetroit!
Esi sithuba sikwinqanaba lesibini, sijonge kwipatio yokutyela engezantsi kunye neNavy Yard Park ecaleni koMlambo iDetroit. Ebusika, vele uphume ngomnyango ukuze ujonge uMnyhadala omhle we-River Lights wase-Amherstburg, ohombisa iipaki kunye nezitrato ngexesha leHolide. Kwiinyanga zasehlotyeni, usentliziyweni yazo zonke izenzo eDowntown Amherstburg.
Zenze ukhululeke kwikhaya lakho kude nekhaya.
Uya kuba sentliziyweni yeMbali ye-Amherstburg. Uhambo olufutshane ukuya eFort Malden National Historic Site okanye uhambo olufutshane ukuya kwizixeko ezikhulu, eDetroit okanye eWindsor. Ukuqhuba kwicala elichaseneyo kuyakusa kwindawo yethu yewayini yasekhaya.
Zive ukhululekile ukundithumelela umyalezo nangaliphi na ixesha ngemibuzo malunga neflethi kuyo nayiphi na enye into kubandakanya izinto ezinomtsalane zalapha ekhaya.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Amherstburg